'Ukungabi nazintloni' Ukuphindaphinda 6 × 06: UkuFunda, ukuKopa kunye nokuKhupha isisu | - Itv
Eyona Itv 'Ukungabi nazintloni' Ukuphindaphinda 6 × 06: Ukufunda, ukuKopa kunye nokuKhupha isisu
'Ukungabi nazintloni' Ukuphindaphinda 6 × 06: Ukufunda, ukuKopa kunye nokuKhupha isisu
UDermot Mulroney kunye noEmmy Rossum kwi Iintloni .(ifoto: Ixesha lokubonisa)
I-albhamu ye-r & b ehamba phambili ngo-2016
Abafana, ndiyazivuma: UCarl usenokuba ngumntu wam omtsha endimthandayo Iintloni . Isiqendu sale veki besingeyiyo ikarl-centric kuphela kodwa sifumene ixesha elininzi kunye nomncinci wesibini omncinci uGallagher. Masingene phakathi.
Isiqendu sivula ngoCarl noNick behlala ehotele ukusukela oko kwagxothwa eGallgher. UCarl ufumana ubomi bakhe ebetha kwi-cheerleader ngelixa uNick elilela ubusela bebhayisekile yakhe. Amakhwenkwe aphela ngokuthenga imoto ngaphandle kwento yokuba akukho namnye kubo onephepha-mvume.
UDebbie usahlala nomama womhlaza, uErica, ngelixa uFrank etshayisa phantsi rhoqo ebusuku. Emva kokuba uErica enxilile elala ebhedini enye noDebbie, uFrank uyaqiniseka ukuba indlela yokuhlala kubomi bosapho kukuDebbie olala noErica. Ndandifuna ukuthetha malunga nokuba kunjani ukuba uFrank uzama ukukhupha intombi yakhe yeshumi elivisayo, kodwa andinakumangaliswa nguFrank kwakhona. Kodwa ke ndicinga ukuba uWilliam H. Macy ufanelwe ngcono kunale.
UFiona okhulelweyo ukhawuleza abuyele kwi-casa Gallagher ukuze abambe umnyango ophawulwe ngobude be-Gallagher nganye njengoko bekhulile. Ngethuba elapho, ubalekela kumthengi omtsha kunye nomhloli. Indlu ngumboniso opheleleyo nge-asbestos, iintubi, imibhobho emibi njlnjl kwaye iya kuxabisa i-150k yeedola ukulungisa. Umtsalane wethemba kuFiona xa umthengi omtsha ebonakala ngathi akonwabanga.
UFrank uthatha uErica aye kwagqirha kwaye ufumanisa ukuba ukhululekile. Ewe nguErica! URuh roh kaDebbie noFrank! Utyhala uDebbie nokuba nzima ngakumbi ukusondelelana no-Erica; Ukunyanga u-Alibi wonke kwintetho yakhe malunga nokonwabisa umfazi.
Umlomo kufuneka uye kwindibano yoluleko malunga nobudlelwane bakhe noHelene. Uyaphakuzela kwaye uzama ukwenza ukuba uAmanda abuyise ukukhulula umfanekiso, ethi, masibe yinyani, ayisiyonto. Ushiya ikhampasi emva kokuba i-femi-nazis imtyhole ngokuzama ukonakalisa umfazi ophumeleleyo ngenxa yokungaziphathi kakuhle ngaphakathi. Umlomo ufuna uncedo kuNjingalwazi uYouins omxelela ukuba ubomi bumalunga nezinto ezimbini kuphela: ukufunda kunye nokuhlangabezana. Fumana into efanelekileyo yokufunda kwaye ujongane nayo. Ayisiyo isisombululo kwingxaki yeLip yangoko kodwa yinto ekufanele ukuba uyicingile nangona kunjalo.
UDebbie ufumana i-ultrasound kunye noFrank kwi-tow kwaye unokwaneleyo ngoku ngoku ukufumana isondo somntwana. U-Erica unikezela ukumphosa kwiqela elityhila isini. Oku kukhuthaza uDebbie noFiona ukuba bathethe ekugqibeleni kodwa akupheli kakuhle. UFiona akasayi kuxhasa iiDebs kwaye iDebs ziyala ukulahla umntwana.
UFiona ufumanisa ukuba angayibuyisela indlu lo gama nje esenayo intlawulo, imali mboleko kunye nefomu etyikitywe nguGus, indoda esatshate nayo ngokusemthethweni. UGus unika uFiona ukubaleka-ngeenxa zonke kwaye umenze ukuba amlinde eAlibi kangangeeyure ezintathu ngaphambi kokuba angazikhathazi ngokubonisa.
Ekuphulaphuleni, iLip inyanisekile ngokusemandleni ngelixa uHelene emfutshane ngokufutshane. Uthatha uxanduva ngezenzo zakhe kwaye anike ingxelo ebhaliweyo ngale meko kwaye athi sele ekulungele ukuthatha ikhefu lokungabikho. Uxelela ikomiti ukuba akasanxibelelani noMlomo kwaye ubudlelwane babo buphelile nge-100%. Oku kuyayonakalisa imilebe kwaye uyamgxotha ekuveni. Umxelela ukuba angaze aqhakamshelane naye, umyeni wakhe okanye unyana wakhe.
Endleleni eya kwisini kutyhila iqela, uCarl, uNick, kunye noDebbie babona umntwana owebile ibhayisekile kaNick. UNick umleqa emotweni ngaphambi kokuba aqiniseke nguCarl ukuba angayilandeli. Izinto ziqala ukungatyhileki ethekweni xa uErica efumanisa ukuba uxolelwe kwaye uNick usebenzisa ukuphazamiseka kokushiya indlu. UCarl uyamsukela kwaye umfumana endlwini yenkwenkwana. Isikhalo sinokuvakala endlwini kwaye uCarl ubona isando segazi ecaleni kukaNick. Ngalo mzuzu siyaqonda, ngaphandle kwayo yonke inkalipho, nemali, kunye nokubonisa, uCarl usengumntwana kakhulu. Utyhafile, ubaleka abaleke aze abukele amapolisa amsa eluvalelweni.
UCarl uvela emnyango kaSean ekhangela uFiona, okwi-diner elinde uGus… kodwa ngaphezulu koko kamva. Kwisithuba semizuzu, uCarl ukhangeleka ngathi uhambile eneminyaka elishumi elinamithathu elangazelela ukuya kwiminyaka emihlanu ubudala ofuna nje ukwangiwa ngudade wabo-mama. USean ubuza ukuba uCarl ufuna uncedo na kwaye uCarl uyabuza ukuba angahlala ubusuku kwaye uSean uyamvumela… nokuba madolw 'anzima.
UGus ekugqibeleni ubonakalisa indawo yokutyela apho uFiona elinde khona notary. Uyamxelela ukuba uyakufumana umsesane kagogo wakhe kwakhona kuye ngosuku olulandelayo ngenxa yokuba ikwibhokisi yediphozithi ekhuselekileyo. Ayibobuxoki obo? Wayibamba, akunjalo? Yikes. Ohlala enetyiwa uGus uyala ukusayina amaphepha, endaweni yoko ukhetha ukulahla ikofu ngaphezulu kwabo. Ndifumana ukuba i-Gus 100% inelungelo lokuqhubeka nokuba nomsindo kodwa kuya kuthatha ixesha elingakanani? Ngoku udlala nje kungekuphela ngokuziphilisa kukaFiona, kodwa nangabo bonke abantwana baseGallagher. Konele konele. Buyela emva ekubhaleni iingoma zakho zokuziphindezela uyeke uFiona aphile, Gus.
UFiona uza ekhaya aze aphule ngokupheleleyo ezingalweni zikaSean. Yonke into ebekade eyibambile iza iyaphuma kuye. UCarl uyayibona yonke le nto isenzeka kwaye emva koko simbona emba phakathi ebaleni. Uqengqeleka aye kwindawo yokutyela ngengomso aze anike uFiona ibhegi yeduffel. Thenga kwakhona indlu. Ingxowa izele yimfumba yemali.
Ezinye izinto ezenzekileyo kwesi siqendu:
-U-Ian waphuma ngomhla wokwenyani kunye nomcimi-mlilo kwaye wafumanisa ukuba akanalo nofifi lokuba angathandana njani ngenxa yokuba bonke ubudlelwane bakhe bangaphambili bebusekelwe kwezesondo. Umcimi-mlilo unomonde kuye nangona kwaye bobabini babelana ngomzuzu wethenda kwigalari yobugcisa bomlilo. Nangona kunjalo, ndiziva ngathi konke oku kukhokelela ekubeni uMickey afumane ukukhululwa kwangoko kwisithambiso kwaye u-Ian kufuneka enze ukhetho phakathi komlilo oshushu kunye nefelon.
-Umama kaSammy, uQueenie, uvela kwimisebenzi yemithi ukuze anyamekele uChuckie. Yena noFrank baphinde banxibelelana nobumdaka, nangona babunomdla wokuzonwabisa. Sele ndimkhathalele ngaphezu kuka Sammy no Chuckie bedibene.
-V kunye noKevin basazama ukuqonda indlela yokwenza iAlibi ibe yimpumelelo ngaphandle kweehipsters. UKevin uqala unyuselo apho nabani na ongena kwibhar ene-stub yokungasebenzi, isaziso sokukhutshwa, okanye into evaliweyo evaliweyo ufumana isaphulelo. Kuyimpumelelo kodwa ngoku ukuba ibha inayo yonke imiqobo, iihipsters zifuna ukungena kwakhona. Bavumile ukuvumela iihipsters ezine ngeyure ukuba bahlawule ikhava yeedola ezingama-25. Ubuchule.
-U-Fiona ufumene isisu ekudala silindelwe kwaye wayiphendula ngendlela endiphendula ngayo xa ndilindile emgceni kwivenkile yaseVerizon. Ucatshukisiwe kwaye ulambile. Ekuphela kwento awayenokuthetha ngayo emva koko yayikukufuna ukubamba ubisi kunye noSean. Mhlawumbi kufanelekile ukuba sizibuze ukuba oku kuya kubuya kwakhona kuye okanye ukuba ababhali benza inkcazo ngelungelo lomfazi lokukhetha. UFiona wakhupha isisu kuba wayesazi ukuba akakulungelanga oku komntwana kwaye yayiyilonto. Ngaba kufuneka ibe sisigqibo esikhulu, esibuhlungu okanye singakholelwa nje ukuba uFiona wenze ukhetho olwalumlungele kwaye akukho sizathu sokuhlala kuso? Ndiyathemba ukuba le yokugqibela.
Uphengululo lwemovie: Ukufa okuMnyama malunga nokuNwaba okuNjengesibetho seBubonic
'Ekhaya' Ixesha lokugqibela: Awunyanzelekanga ukuba ugoduke, kodwa awunakuhlala apha
Ukuqalisa kufuna bonke abasebenzi abatsha ukuba bakhe iApp, ke aba bafana bakha iHolo N 'Oates Hotline
'SNL' Ngaba uJimmy McMillan kaMongameli [VIDEO]
Iindleko zokwenza abaphindezeli baphele
ukwazi njani ukuba unawo amandla e-psychic
thumela ifeksi kwi-intanethi simahla kuGoogle
Uhlala phi u-oprah eChicago
iinkqubo zokucoca amanzi emakhayeni
Ngaba isiseko se-clinton siyacima
Megyn kelly vs ityala o reilly